प्रेम आले बने झनै निर्मम, बतासको हावागोल हुनेगरी चाले अर्को भयङ्कर कदम ! – Points Nepal
प्रेम आले बने झनै निर्मम, बतासको हावागोल हुनेगरी चाले अर्को भयङ्कर कदम !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २३, २०७८ समय: १४:५०:०२
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले नारायणहिटी प्रकरणमा झन् निर्मम बनेका छन् । आलेले नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने हालसम्मका प्रक्रियाको छानबिनका लागि समिति गठन गरेका हुन् । आलेको यो कदमपछि बतास समूहको हावागोल भएको खबर छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनले विहीवार पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईटेलको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेका हुन् ।
तीन दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री आलेले नेपाल प्रेसलाई बताए । समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी छन् ।
आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्र व्यापारिक हिसाबले बनाइएको संरचना हटाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
Last Updated on: January 7th, 2022 at 2:50 pm